Ethiopia “Dhib badan ayaa nagu heysta Soomaaliya”. | Voice Of Somalia
Posted on April 29, 2016 by Voice Of Somalia Image
Dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay sheegtay iney aad uga xun tahay waxa ay ugu yeertay “marnaanta siyaasadeed” ee ka jirta deegaanada ay ka qabsadeen Xarakada Al-Shabaab iyagoona ku eedeeyay DF-ka ineysan buuxin Karin howsha loo baahan yahay.
Afhayeenka Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Tuwelda Moligiita oo la hadlay wakaaladda wararka Turkiga ee Anaadool ayaa sheegay taxaddiyada ugu weyn ee ciidankooda ku heysta Soomaaliya iney ka mid tahay wax barnaamij siyaasadeed ah in uusan jirin oo loo hayyo dhulka ay ka qabsadaan Al-Shabaab.
“Arrinta ah in la dhimayo dhaqaalaha waa ceego (dhuun qabasho), waa walwal weyn, waxey ka dhigan tahay. Horumarkii aan xaqiijinnay oo meesha ka baxay” ayuu yiri Tuwelda Moligiita.
Dawladda Itoobiya ayaa ciidankeeda ugu badan waxey ka dagaalamayyaan gobollada Dhexe, Gedo iyo Baay iyo Bakool, waxaana la rumeysan yahay in dalka ay ku soo xaaqeen kumanaan ciidamo ah oo aan u diiwan galsaneyn waxa loogu yeero “Howlgalka AMISOM”.